China i-2019 yoyilo olutsha umenzi okhanyayo ubunewunewu obutofotofo obunokupakishwa kwidada phantsi kwebhedi yokulala mveliso kunye nabenzi | Xueruisha
Enye yeengxowa zokulala ezaziwa kakhulu zilungele ukuhamba intaba, ukuhamba ngeebhayisikile, ukubopha ubhaka kunye nokwenza inkampu, i-Luxury Luxury sisixhobo esithandwayo ezintliziyweni zabantu abahamba ngeenyawo nangobhaka, kwaye lukhetho oluphezulu kwabo bantu bafuna ukuhlala befudumele ezindulini ngexesha naliphi na ixesha lonyaka. Ingasetyenziselwa igadi yakho, emva kwendlu, ipaki, naphina apho unokucinga khona. Ukuba ufuna ukumelana nemozulu ebandayo, le iya kuba yeyona mveliso iluncedo kakhulu kuwe. Isebenzisa ubuchwepheshe bokuthunga obuphambili ukuphucula ubungqongqo bemveliso kunye nokuthintela ezantsi ukuba zingaphumi ngaphakathi. Le ngxowa yokulala inobukhulu obukhulu be-210 × 80cm kwaye ilungele uninzi lwabasebenzisi. Ubushushu obutofotofo obuphakathi ko-1 ukuya ku-7 ℃ bunokuhlangabezana neemfuno zenkampu yangaphandle yemihla ngemihla. Ukutsalwa kwewindow kunye ne-zipper enamathelayo kuyilo oluphuculweyo kuphucula ukusebenza kwomoya kunye nokufudumala kwebhegi yokulala. Uyilo lokhuselo lobuso olungaphezulu koluntu, ikunike uluhlu olupheleleyo lokhuseleko. Sisebenzisa i-20-deniel Fabric yeNylon ene-anti-iinyembezi, ubungqina obuphantsi, ukusebenza okungafunekiyo kwamanzi. Ngaphezulu, i-90% idada phantsi njengezinto zokugcwalisa, ezilula kakhulu kwaye zishushu kakhulu. Inokukunceda ukumelana nemozulu ebandayo. Khaphukhaphu, kulula ukuyiphatha, iphathekayo, ubungakanani beepakethe obuncinci kunye nokuguquguquka kwezinto eziqhubekayo ezivumela ukuKhanya okuKhanyayo ukuba kuguqukele kwiinyanga ezishushu ngokugqibeleleyo. Ukongeza, le bhegi yokulala yifashoni kwaye iluhlobo olusebenzayo, kwaye sibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zemibala, isitayile, ubungakanani kunye nokunye. Siyathemba ukuba uya kuzithanda iimveliso zethu kunye neenkonzo, ngenxa yokuba sizinikele kuko konke esikwenzayo ukuphuhlisa nokwenza imveliso ephezulu iimveliso zangaphandle ezisemgangathweni. Ke, wamkelekile ukukhangela iwebhusayithi yethu kwaye ukhethe enye yazo, ndiyakholelwa ukuba kufanele ukuba kubekho uhlobo olunye olunokuhlangabezana nesidingo sakho. Kananjalo unokuqhagamshelana nathi, ukuba unawo nawaphi na amathandabuzo malunga neemveliso zethu.
Xa ukhetha iibhegi zokulala, ukongeza ekuqwalaseleni izinto ezithile ezisisiseko (ezinje ngokusetyenziswa kweengxowa zokulala, ukufudumala, izinto zokugcwalisa, imilo, ubude, njl. Njl.), Kufuneka sivavanye iibhegi zokulala oza kuthenga kuzo. ezinye iinkcukacha. Ngamafutshane, zininzi iintlobo zeebhegi zokulala, kodwa njengezinye izixhobo zemidlalo yangaphandle, eyona ibiza kakhulu yeyona ilungileyo. Kuphela zezo zinokuhlangabezana neemfuno zakho ngokufanelekileyo kwaye zitshatise imidlalo yakho yangaphandle lolona khetho lwakho lubalaseleyo.
Okulandelayo: 2020 mveliso ubusika abadala inkampu idada / irhanisi phantsi ukulala ibhegi kwihowuliseyili